Wararka - Qalabka birta birta - iska caabbinta duugga ah, cimri dherer iyo waxqabadka qiimaha badan
Qalabka birta birta - iska caabbinta duugga ah, cimri dherer iyo waxqabadka kharashka badan
Qalabka birta ayaa ah walxaha birta ah ee loo isticmaalo soo saarista aaladaha jarista, qalabka cabbiraadda, wasakhaha iyo aaladaha u adkeysta xirmooyinka .Tool steel wuxuu leeyahay adkaansho sare wuxuuna ku hayn karaa adkaanta sare heerkulka sare, iyo sidoo kale iska caabbinta sare iyo adkeysiga ku habboon. loo qaybiyey birta aaladda kaarboon, birta aaladda daawaha iyo birta aaladda xawaaraha sare leh.
Birta loo isticmaalo soo saarida aaladaha kala duwan ee wax lagu jaro, qabowga iyo cilladaha kulul ayaa dhinta, aaladaha wax lagu cabbiro iyo aaladaha kale waxaa lagu magacaabaa aaladda birta ah. shuruudaha gaarka ah, sida adkaanta cas, caabbinta saameynta, xasiloonida cabirka, iska caabinta daalka kuleylka iyo qaababka farsamo ee dhameystiran. Si loo buuxiyo shuruudahan kala duwan, birta qalabka leh halabuurrada kala duwan ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka, iyo habka daaweynta kuleylka saxda ah ayaa la qaatay.
TAA sidoo kale waxay soo saartay daab cusub oo ka samaysan bir bir ah. Iyada oo loo marayo goynta, axdi qarashka biyaha iyo habab kale, garbaha waxay leeyihiin iska caabin badan oo saameyn iyo iska caabin ah.
Qalabka birta qalabka waxaa loo isticmaalaa fiilada siligga, qalabka qalabka, qaab dhismeedka birta, mashiinada dhismaha, birta, qalabka, guga iyo warshadaha kale
Maxay yihiin faa'iidooyinka qalabka birta birta ah?
Waxqabadka qiimaha ee daab bir ah waa sarreeyaa: qiimaha ayaa ka sarreeya daabka caadiga ah, iyo nolosha adeeggu waa dhowr jeer oo daab caadi ah. Isla mar ahaantaana, yaree inta jeer ee dayactirka mashiinka toogashada, yareeyo xoogga shaqada ee shaqaalaha. The iska caabin ah xirtaan of ouraalado bir bir ah aad ayuu uga sareeyaa kan caleemaha sare ee chromium-ka ee suuqa yaalla!
Qalabka birta ah waa nooc ka mid ah walxaha u adkaysta dharka oo leh waxqabad aad u fiican. Waxay leedahay iska caabin duug ah oo aad uga saraysa birta dahaarka leh, waxayna leedahay adkeyn wanaagsan, xoog iyo heerkul wanaagsan oo wanaagsan iyo caabbinta caabbinta. Nolosha adeegga birta aaladda waxay si dhow ula xiriirtaa tayada daaweynta kuleylka. Daaweynta kuleylka ee birta aaladda waxaa lagu gartaa is-beddelka 'spheroidal annealing' si loo helo qaab-dhismeed dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, Daaweynta kuleylka ugu dambeysa waa deminta iyo kuleylka heerkulka hooseeya (birta xawaaraha sare leh ayaa la demiyaa oo la qaboojiyaa 560 ℃ saddex jeer), si ay u hel dhisme adag oo adag oo leh carbides quruxsan oo loo qaybiyay shaashadda martensite oo hubi kara iska caabbinta birta qalabka. Daaweynta kuleylka ee birta u dhinta foojarka kulul way ka duwan tahay. Daaweynta kuleylka-hore waa hal-ku-dhejin, iyo daaweynta kuleylka ugu dambeysa waa la bakhtiiyaa oo lagu daray xummad heerkulka dhexdhexaadka ah ama xanaaqa heerkulka sare si loo helo sifooyin farsamo oo dhameystiran.
Waa maxay farqiga u dhexeeya daab birta qalabka iyo daab guud?
TAA toogtay engeeg qalab mashiinka daab bir wuxuu leeyahay muuqaal siman oo dhalaalaya, godad yar oo ciid ah, nolol adeeg dheer iyo iska caabbinta wanaagsan. Inta badan caleemaha caadiga ah waa daab yar oo chromium leh maadada chromium ka hooseysa 11%. Tuurista chromium-ka hooseeya waxay leeyihiin cilado aad u daran ...
Maxay yihiin faa iidooyinka isticmaalka qalabyada birta birta?
Guud ahaan qalabka birta birtu waxay leedahay nolol adeeg dheeri ah ， markaa waxay keenaysaa soo noqnoqoshada soo noqoshada labaad, sababta oo ah nolosha oo dheer iyo adeegsiga hoose ee qalabka birta birta ah, waxay si wax ku ool ah u yareeysaa xaalada in mashiinka toogashada toogashada loo xiro dayactirka, isla markaana yareeyo kharashka shaqada.
Soosaarka fiidiyowga ee qalabka birta birta:
Ka sokow daab bir qalab, daab wax kale ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa,Mawduuca Cr-12%, 20%, 25% ama codsi ahaan.
Iyo qaybo kale oo dayactir ah mashiinka qaraxa waa la bixin karaa, sida:gawaarida gawaarida, gawaarida, kiisaska gawaarida, gawaarida gawaarida, madaxa gawaarida, saxanka waardiyaha, taarikada safka iyo wixii la mid ah.
Aqoon isweydaarsi wax soo saar nadiif ah oo nadiif ah oo leh waxqabad sare toogtay mashiinka-engeeg iyo dayactir
Waqtiga boostada: Meey-06-2021